'नेपाल क्रिकेट व्यक्तिबाट होइन प्रणालीबाट चल्नुपर्छ, प्रणाली अझै बनेको छैन' | | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Oct 16, 2020
नेप्लेज । पारस खड्काले सन् २००९ देखि २०१९ सम्म नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानी गरे । १ दशकसम्म कप्तानको भूमिकामा रहेका उनले पदबाट राजीनामा दिएको १ वर्ष पुगेको छ । सन् २००४ देखि राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको सदस्य पारस १६ वर्षे खेलाडी जीवनमा सबै उपलब्धी हासिल गरे । नेपाललाई डिभिजन पाँचदेखि एकदिवशीय मान्यता र ट्वान्टी–२० विश्वकपसम्मको ऐतिहासिक उपलब्धिमा उनको कप्तानी भूमिका निकै नै सराहनीय रह्यो ।
सन् २०१६ मा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)ले निलम्बन गरेपछिको तीन वर्ष आईसीसीसँगको सहकार्यमा खेलाडी छनोटदेखि व्यवस्थापनको जिम्मेबारी पनि बहन गरे । गत वर्षको असोजमा क्यानको निर्वाचन सँगै नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि आईसीसीले निलम्बन ससर्त फुकुवा गरेको भोलिपल्ट पारसले कप्तानबाट राजीनामा दिएका हुन् । पूर्व कप्तान पारससँग हामीले कप्तानबाट बाहिरिएको १ वर्षमा भएका परिवर्तन र एकदिवशीय मान्यता जोगाइराख्न लिनुपर्ने रणनीतिबारे कुराकानी गरेका छौंः
तपाईले नेपाल क्रिकेट टोलीमा एक दशकसम्म कप्तान रहनेर राजीनामा दिनुभएको १ वर्ष पूग्यो । यो १ वर्षमा परिवर्तन चाही के–के पाउनुभयो ?
परिवर्तन भन्दा पनि मूख्य त नेपाल क्रिकेट संघ कस्तो हुनुपर्छ र अहिले कहाँ छ भन्ने कुरा हो । मैले पहिलादेखि भन्दै आएको कुरा व्यक्ति भन्दा पनि नेपाल क्रिकेट महत्वपूर्ण छ । मैले त कप्तानको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न खोजेको हो । अहिले खेलाडीको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैछु । अहिले व्यक्ति भन्दा पनि नेपाल क्रिकेट उचित प्रणालीबाट चल्नु पर्छ । र, त्यो परिवर्तन अहिलेसम्म देखिएको छैन । हेरौं आगामी दिनमा के हुन्छ ।
तपाईले क्यानमा नयाँ नेतृत्व आएपछि राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो, नयाँ शिराबाट काम शुरु गर्नका लागि कप्तानबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको थियो तर अहिलेसम्म देखिने गरी काम त भएको छैन नि है ?
देखिएको छ÷छैन भन्ने कुरा उहाँहरुको दायित्वभित्र पर्छ । मैले पनि व्यक्तिगतरुपमा खेलाडीको रुपमा र विभिन्न तरिकाले उहाँहरुलाई सुझाव दिएको छु । गर्नुपर्ने ठाउँमा भएका व्यक्तिहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । उहाँहरुले कसरी काम गर्नुभएको छ र उहाँहरुले गरेको कामको मूल्यांकन कसरी र कसले गर्ने भन्ने कुरा हो ।
राजीनामा दिँदा तपाईले व्यक्तिगत कारण भने पनि धेरैले क्यानको विपक्षमा रहेको भन्ने आरोप लगाएका थिए नि ?
त्यस्तो होइन । म क्यानको विपक्षमा गएर राजीनामा गरेको होइन । क्यानको विपक्षमा कहिले पनि थिएन र हुने कुरा पनि होइन । क्रिकेटको लागि राम्रो जसले गर्छ त्यो व्यक्ति संस्था जसलाई पनि गर्ने हो । क्रिकेटमा यत्रो समय बिताकाले मैले जहिले पनि क्रिकेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको छु । क्रिकेटका गतिविधि जति पनि क्यानसँगै ठोकिन्छ । म उहाँहरुको विपक्षमा नभई राजीनामाको विषय मेरो व्यक्तिगत निर्णय हो ।
क्यान आएर/गएर भन्दा पनि क्रिकेट कहाँ छ र कहाँ पुग्न सक्छ, क्रिकेटको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणको रुपमा विगतमा हामी खाली नेपाल चुकेको, क्यानले के गर्‍यो के गरेन भन्ने कुरामा केन्द्रित भयौं । क्यानले यो भन्यो, खेलाडीले यो भन्छन् भन्ने कुरामा भन्दा पनि क्यानका पदाधिकारीले के गर्नुभयो र के योजना बनाउनु भयो भन्ने कुरामा उहाँहरुले सोँच्नु पर्‍यो ।
उहाँहरुलाई काम गर्नका लागि कसैबाट अबरोध भएको जस्तो लाग्दैन, तर उहाँहरुसँग ठोष प्लान छैन, तर, अबको दिनमा क्यानले योजना र रणनीति बनाएर राम्रोसँग कार्यान्वयन होस् । तपाई हामी जति रोइ कराई गरे पनि केही हुँदैन
अहिले त अझ कोभिड छ । जसले गर्दा ७ महिना त त्यसै खेर गएको छ । अब त योजना रणनीति बनाएर अघि बढ्ने बेला भएको छ । भोलि भोलि भन्दा भन्दै धेरै ढिला हुनसक्छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हामी खेलाडीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौं । खाली खेलाडीहरुलाई ‘कोट’ गरेर ‘कन्ट्रोभर्सी’मा ल्याउन भएन ।
क्यानको एक वर्ष जसरी वित्यो, यसले आगामी दिनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
क्यानको आफ्नो रणनीति होला । चुनाव जितेर उहाँहरु आउनुभएको छ । यत्रो प्यानलसहित नै जितेर आउनु भएकाले पक्कै पनि उहाँहरुसँग योजना होला । पदमात्रै लिन त आउनु भएको त पक्कै छैन होला ।
साथसाथै अहिले काम देखाउनका लागि गरियो की साँच्चिकै गरियो भन्ने ठूलो प्रश्न हो । अहिले क्यानलाई मात्रै दोस दिन भने मिल्दैन । क्यानसँग पनि सिमित स्रोत साधन छ । क्यान अझैं पूर्णरुपमा फकुवा भएको छैन । एक वर्षसम्म किन पूर्ण फुकुवा हुन सकेन भनेर उहाँहरुले नै जवाफ दिन सक्नुहोला ।
उहाँहरुलाई काम गर्नका लागि कसैबाट अबरोध भएको जस्तो लाग्दैन । तर उहाँहरुसँग ठोष प्लान छैन । तर, अबको दिनमा क्यानले योजना र रणनीति बनाएर राम्रोसँग कार्यान्वयन होस् । तपाई हामी जति रोइ कराई गरे पनि केही हुँदैन । नेपाल क्रिकेट संघ आगामी तीन वर्ष उहाँहरुले नै हो चलाउने । उहाँहरुले क्रिकेटको विकास गर्नुपर्छ । अहिले व्यक्तिगत स्वार्थहरु सबै त्यागेर अघि बढ्ने बेला छ । क्यान संस्था भएकाले जे कुराहरु पनि संस्थागतरुपमा अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
पछिल्लोपटक ललित भन्डारीका लागि नेपाल क्रिकेट खेलाडी संघले जस्तो पहलकदमी लियो । संघको महासचिवको नाताले तपाईं निकै सक्रिय रहनुभयो । यसरी संगठित रुपमा सहयोग गर्ने अवधारणा कसरी आयो ?
मैले एउटा खेलाडीलाई सहयोग गर्न पहलकदमी लिएको हो । किनभने त्यो आकस्मिक घटना थियो र मानिसको जीवन मरणको कुरा थियो । आफ्नो सीमित श्रोत साधानका बीच खेलाडी संघ अन्तर्गत नै रहेर काम गरिएको हो । भोलिको दिनमा यस्तै
अवस्थाबाट गुज्रने अन्य खेलाडीका लागि के गर्ने भन्नेबारे खेलाडी संघमा कुराकानी भएको छ । खेलाडीमा आपतकालीन अवस्था आयो भने खेलाडी संघले कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मापदन्ड तोक्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ ।
मैले व्यक्तिगत रुपमा आफूूले जे गर्न सक्छु त्यही गरेको हो । यो काम पारस खड्का एक्लैले पनि गरेको होइन । यो हामी सबैको पहलबाट एक जनाको ज्यान जोगिएको हो । यसमा ठूलो भूमिका डाक्टरहरुको थियो । त्यो भन्दा अगाडि नेपालगन्जमा र धनगढीमा पनि उपचारका लागि कस्तो पहल भयो भन्ने बारे ललितलाई नै थाहा छ । अहिलेको लागि ऊ खतरामुक्त छ र आशा गरौं ऊ छिटो भन्दा छिटो उ क्रिकेट मैदानमा फर्कियोस ।
खेलाडीको रुपमा, पूर्व कप्तानको रुपमा र क्रिकेटमा लागिरहेको व्यक्तिको हिसावमा मैले नेपाल क्रिकेटका लागि जहा“ राम्रो हुन्छ, खेलाडीहरुका लागि जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि भूमिकामा म आफूले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो ।
मान्छेले यो भन्ला त्यो भन्ला भनेर लाग्ने हो भने सायद हामी यहाँसम्म कहिल्यै पनि आइपुग्ने थिएनौं । त्यसैले कसले के भन्छ भनेर सोच्नुभन्दा पनि राम्रो काम र आफ्नो जिम्मेबारी बहन गर्दै खेलाडीका लागि गर्नुपर्ने राम्रो कामका लागि म सधैं अगाडि नै बढ्नेछु ।
२०२१/२२ मा हामी व्यस्त हुनेछौं । हामीले नियमित प्रशिक्षण गर्न नपाएको ७ महिना भएको छ र अझै कहिले खुल्ने थाहा छैन । त्यसले टिमको प्रदर्शनमा असर पुग्नेनै छ । कतिको दवाव हुन्छ ?
पक्कै पनि त्यो हाम्रा लागि दवावपूर्ण अवस्था हुनेछ । किनभने ६/७ महिनादेखि प्रशिक्षण भएको छैन । अहिले पनि प्रशिक्षण गर्न घरबाट निस्कने सक्ने अवस्था आइसकेको छैन । २०२१ मा धेरै अर्को वर्ष धेरै व्यस्त हुनुपर्नेछ ।
को प्रशिक्षक ठीक हुने भन्दा पनि एकदिवशीय मान्यताको अवधि छोटो भएकाले नितान्त नयाँ प्रशिक्षक आउँदा एकदिवशीय मान्यता जोगाउने गरी तत्कालको रणनीति बनाउन कठिन हुन्छ कि !
प्रशिक्षकको लागि आवेदन पनि खोलिएको छ । राम्रो प्रशिक्षक ल्याउनुपर्छ । सायद १२/१४ महिना बाँकी छ होला हाम्रो एकदिवशीय मान्यताको समय । यसबीचमा सबै समस्याहरु समाधान गरी क्रिकेट टिमलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । ता कि मैदानमा राम्रो नतिजा ल्याउन सकियोस र राम्रो नतिजा ल्याएर मात्रै आगामी दिनमा हामीले भविश्य सुरक्षित गर्न सक्छौं ।
अहिलेको लागि चाहीँ चुनौतिपूर्ण नै छ । किनभने हामी क्रिकेटबाट बाहिर छौं र हामीमात्र नभएर धेरै देशहरुमा क्रिकेट गतिविधि हुन सकेको छैन । नेपालमा खेलकुदलाई नै कसरी सुरु गर्ने भन्नेबारे योजना रणनीति बनेको थाहा छैन । क्रिकेट कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्नेबारे कुरेर बस्नुपर्ने छ । आशा गरौं क्रिकेट सुरु भएपछि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकौं तर सजिलो चाहीँ हुने छैन ।
एकदिवशीय मान्यता कायमै राख्न कतिको कठिन देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस ग्यारेन्टी केहि कुराको पनि छैन । एकदिवशीय मान्यतामा हाम्रो क्रिकेटको भविश्य जोडिन्छ त्यसैले खेलाडीहरु यो मान्यता जोगाउन जिउज्यान लगाएर प्रयास गर्नेछन् । तर टिमको प्रदर्शन भनेको क्षणिक हुन्छ । एउटा उचित प्रणाली स्थापित गरी त्यसैलाई अगाडि बढाउने बारेमा सोच्नुपर्छ ।
मेरो बिचारमा १२ देखि १५ वर्षमा नेपाल टेष्ट मान्यताप्राप्त देश हुनेछ । टेष्ट मान्यता पाउने योजना लिने हो भने एकदिवशीय मान्यतामा निरन्तर रहनुपर्छ । त्यसका लागि मैदानभित्रको प्रदर्शन र मैदान बाहिरको संरचना दुवै उत्कृष्ट हुनुपर्छ । के गर्ने कसोगर्ने भन्ने जिम्मेबारी क्रिकेट संघले लिनुपर्छ । संघको कदममा हामी खेलाडीहरुले आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गरेर उहाँहरुको राम्रो सोचलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
अन्तिममा नयाँ प्रशिक्षक अनुबन्भको तयारी भइरहेको छ । कस्तो प्रशिक्षक नेपाललाई आवश्यक छ आजको अवस्थामा ?
को प्रशिक्षक ठीक हुने भन्दा पनि एकदिवशीय मान्यताको अवधि छोटो भएकाले नितान्त नयाँ प्रशिक्षक आउँदा एकदिवशीय मान्यता जोगाउने गरी तत्कालको रणनीति बनाउन कठिन हुन्छ कि । सुनेअनुसार पुराना प्रशिक्षकहरुले पनि आवेदन दिनुभएको छ । पुवुदु दासानायके लगायतका प्रशिक्षकहरु नेपाल आएर काम गरिसक्नुभएको छ । त्यो बाहेक पनि धेरै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरुले आवेदन दिनुभएको होला ।
प्रशिक्षले जस्तो सिकाए पनि खेल्ने खेलाडीहरुले नै हो । नयाँ प्रशिक्षक आएपछि योजना र रणनीति राम्रो हुन्छ र टिममा सकारात्मक भावनाको बिकास हुन्छ भने खेलाडीहरुले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ । तर व्यक्तिगत रुपमा यही प्रशिक्षक चाहिन्छ भनेर हामीले बोल्न मिल्दैन र जो आएपछि केहि फरक पर्दैन ।
राम्रो प्रशिक्षक वा राम्रो खेलाडी भन्दा पनि नेपालको अवस्था हेरेर कसले राम्रो योगदान दिन सक्छ त्यस्ता प्रशिक्षक ल्याएर र अहिलेको लागि कम्तिमा एकदिवशीय मान्यता जोगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । आशा गरौं क्रिकेट संघले राम्रो प्रशिक्षक छान्नेछ जसले नेपाल क्रिकेटलाई समान स्तरमा कायम राख्न सकोस ।
चेन्नाईको हरेक सिजन प्लेअफमा पुग्ने कीर्तिमान यसपल्ट तोडिएला ?
हैदरावादद्वारा राजस्थान ८ विकेटले पराजित
जिम्बावेका २ खेलाडीमा काेराेना पाेजेटिभ
पाकिस्तानले टेष्ट टिमकाे कप्तान फेरी परिवर्तन गर्ने याेजना
राजस्थानले हैदरावादलाई दियो १५५ रनको लक्ष्य, दुवै टिमलाई जित्नैपर्ने दबाव
आइसीसी विश्वकप लिग टु का अधिकांश खेल दुबईमा गर्ने तयारी,…
नेपालले बंगलादेशसँग कार्तिक २८ र मंसिर १ गते मैत्रीपुर्ण खेल खेल्ने